Muuse Biixi oo maanta loo dhaariyey xilka Madaxweynaha Somaliland – HORNAFRIC MEDIA
Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo Maanta si rasmi ah ula wareegay xilka iyadoo lagu Caleemasaaray xarunta madaxtooyada, Khudbad uu jeediyey ayuu u Mahad celiyay Musharaxiintii kula Tartamay Xilka Madaxweynaha Somaliland.
Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in Xafladda lagu Caleemasaaray ay ka soo qeyb galeen Saddex ka mida Shanta Soomaaliyeed oo kala ah Jabuuti, Soomaali Galbeed iyo Somalida Kenya ee NFD, balse ay ka maqan tahay Muqdisho sida uu hadalka u dhigay.
Intaas ka dib ayaa Goobta ay ka dhacday Xafladda Caleemasaarka lagu dhaariyay Madaxweynaha Cusub ee Somaliland oo noqday Madaxweynihii Shanaad ee Somaliland ay yeelato ilaa muddo 26sano ah.
Xafladda Xaleemasaarka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Madaxweyneyaashii hore ee Somaliland oo kala ahaa Axmed Siilaayo, Daahir Riyaale Kaahin iyo Wakiillo ka socda IGAD, Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo Ingiriiska.
Baarlamaanka Federaalka oo ansixiyey Miisaaniyada dowladda ee sanadka 2018